> Resource> Video> Get Ukwu 1080p Video edezi Software dezie 1080p Videos
M uploaded ụfọdụ 1080p videos m wee si dijitalụ m video igwefoto ka kọmputa m. Achọrọ m tinye ụfọdụ mmetụta ha, otú ahụ ka m na-agbalị Roxio na Mgbe mmetụta CS4. Ma na ma omume, ha egeghị egwuregwu n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Onye ọ bụla maara na a mma 1080p video edezi software usoro?
1080p video ugbu a nwere ike mfe weghaara nkịtị ngwaọrụ dị ka ekwe ntị ma ọ bụ n'ji camcorders. Ma ụfọdụ edezi software nwere nsogbu importing ma ọ bụ edezi ụdị video mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ oké 1080p video edezi software, m ukwuu nwere ike ikwu na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Lee ndị isi atụmatụ nke usoro ihe omume:
Mepụta ahụkebe fim-eji ọtụtụ formatted video, foto na audio Obere vidiyo.
Mfe bugharia, gbawara n'etiti, akuku na ewepụtụ audio, videos na foto na usoro iheomume
Mee ka gị na videos onye na nzacha, Foto dị na-na foto, ikwu n'ụzọ na ọtụtụ ndị ọzọ atụmatụ
Ịkọrọ gị ihe e kere eke ọ bụla na YouTube, gị TV, iPhone, Facebook na n'ebe ndị ọzọ
Mfe nzọụkwụ dezie 1080p videos na nke a 1080p video edezi software
1 Import obere vidiyo
Mgbe ebufe gị video si camcorder ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ, pịa Import bọtịnụ. Mgbe ahụ ị pụrụ ịhụchalụ ma họrọ lekwasịrị video faịlụ, pịa Open ịgbakwunye ha ka ha usoro ihe omume. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe gị faịlụ ka isi window.
2 Dezie gị 1080p video na usoro iheomume
Tupu edezi, ị kwesịrị ị na ịdọrọ dị mkpachị ka usoro iheomume. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike bee, ewepụtụ, ihichapụ, megharia mkpachị-enweghị isi ike na usoro iheomume.
Etinye gị cursor na usoro iheomume, na-ele gị video ke preview window mgbe ọ na-akpọ, ị nwere ike họrọ kpọmkwem osisi maka trimming ma ọ bụ ọnwụ. Ọ bụrụ na ndị video na-gbara na vetikal ma ọ bụ kpodoro isi ala, ị nwere ike mfe tụgharịa ya aka nri ọnọdụ ọkụkụ Bugharia bọtịnụ. Ọ bụrụ na ndị video na-gbara na ọchịchịrị gburugburu ebe obibi, ị pụrụ ọbụna ịgbanwe ya iji mee ka ọ chawapụrụ site n'ịgbanwe iche na ihie. Mpịakọta na ọsọ nwekwara ike-agbanwe ngwa ngwa.
Ị nwere ike ịga na mmetụta taabụ iji tinye pụrụ iche utịp dị ka Linear Ìhè, Rain dobe, Snow na ndị ọzọ ka gị videos ọzọ ahaziri na pụrụ iche. Ma ọ bụ ịgbanwee gaa na Transition taabụ ma ịhọrọ site na 50+ idaha mgbanwe mmetụta nyere.
3 Zọpụta ma ọ bụ ịkọrọ ọhụrụ gị videos
Mgbe ị gụsịa edezi, pịa Mepụta ịzọpụta gị e kere ọhụrụ. Ị nwere ike ịzọpụta ya dị iche iche formats, ozugbo bulite ya YouTube ma ọ bụ Facebook ma ọ bụ ọkụ na-DVD dị ka amasị gị.
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere m na ihuenyo edekọ
Olee otú Mee a GIF si Vine